प्रधानमन्त्री ओली चरमसंकटमा, प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबैपद त्याग्न बालुवाटारभित्रै दबाब - Image Khabar
प्रकाशित मिति : 30 June, 2020 9:55 pm
काठमाडौं, असार १६ । प्रधानमन्त्री केपी ओली चरमसंकटमा पर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अध्यक्ष दुबै पद त्याग्न उहाँमाथि तीब्र दबाब परेको छ ।
नेता बामदेव गौतमले ओली अल्पमतमा परेको भन्दै खुरुक्क राजीनामा दिनुस् भन्नुभएको बैठकमा सहभागि एक नेताले बताए । ओलीबाट पार्टी र सरकार दुबै चल्न नसकेकाले निकास दिनुपर्ने नेताहरुको भनाइ थियो ।
काठमाडौं, असार २७ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी दुर्घटनामा नपरोस् भनेर
सरकार हरेक मोर्चामा असफल : डा. महत
काठमाडौं, असार २७ । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कोरोना महामारी र प्राकृतिक प्रकोपको
विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकः बाढीपहिरोको जोखिमबारे छलफल
काठमाडौं । मुलुकभर बाढीपहिरोको जोखिम बढ्दै गएपछि विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा चलिरहेको
काठमाडौं, असार २६ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीभित्र देखिएको विवाद आन्तरिक विषय भएकाले यसलाई समाधान
आह्वान होला त संसदको विशेष अधिवेशन ?
रोमन आचार्य र दिलिप पोखरेल (इमेज) काठमाडौं, असार २६ । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
काठमाडौं, असार २६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा शुक्रबारपनि माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ ।